Al-Shabaab oo laga saaray fariisimo ay ku lahaayeen Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo laga saaray fariisimo ay ku lahaayeen Galmudug
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Maamulka Galmudug oo is kaashanaya ayaa Kooxda Al-Shabaab kala wareegay degaanno dhaca koofurta magaalada Dhuusamareeb.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Dagaallo Shalay ilaa xalay ka socday duuleedka Magaalada Dhuusamareeb oo u dhexeeyay Kooxda Al-Shabaab iyo Ciidamada Xoogga dalka oo garab ka helaya kuwa Galmudug ayaa soo gabagaboobay, waxaana guulo waaweyn sheegtay Ciidamada Dowladda.
Degaannada lagu dagaalamayay oo ku beegan Koofurta magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu kala magacaabaa, Sinadhaqo iyo labi-dulle, waana tuulooyin ay Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada ay ka geystaan Gobolka Galgaduud.
Taliyaha Guutada 15-aad, Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga Gen: Mascuud Maxamed Warsame oo ka mid ah Saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkaan ayaa sheegay in Ciidamadu ay sii wadi doonaan, baacsiga Al-Shabaab, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid, ayaa hambaliyo u diray Ciidamada Qalabka side wuxuuna si gaar ah ugu hambaliyeeyay Guutada 15 ee qaybta 21 naad ee Ciidamada Xogga Soomaaliya iyo Ciidanka NISA oo degaan baxad weyn leh ka saray kooxda Al-Shabaab.